Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Oo ka maqan dalka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Oo ka maqan dalka.
Last updated Mar 6, 2019 365 0
Madaxda Ugu sareysa dowladda ayaa ka maqan dalka Taasina waxay ka dhigantahay in talada ay sheegtaan in gacantooda ay ku jirto ay haatan maamulayaan shisheeyaha dalka ku sugan ee ilaaliya madaxda dowladda federaalka.
Madaxweyne Farmaajo,Reysulwasaare khayre,iyo Gudoomiyaha golaha baarlamanka Maxamed Mursal Sheikh ayaa dhamaantooda ka maqan Muqdisho iyagoo ka qeybgalaya shirar ka dhacaya dalal kala duwan oo ay ukala safreen.
Farmaajo ayaa ku sugan Kenya isagoo la kulmaya madaxda dalkaasi waxaana lagala hadlayaa damaca Kenya ee badda.
Khayrana waxa uu shir kaga qeybgalaya Swizerland, halka gudoomiyaha Baarlamanka uu ku suganyahay dalka Turkiga.
Waa markii Sadaxaad oo madaxda dowlada Federaalka ay ka wada maqnaadaan wadanka.
Hadii uu Madaxweynuhu Maqan yahay Waxay ahayd in booskiisa uu buuxiyo gudoomiyaha Baarlamanka oo noqon lahaa kusimaha madaxweynaha.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamanka ayaa sheegaya in sharci daro ku tahay qaanuunkooda in sadaxda nin ee ugu sareysa dowladooda ay hal mar ka maqnaadaan wadanka.
Dalalka leh dowladaha madax banaan ayaanan mar qura wadanka Faarujin, iyagoo ka baqa af ganbi ama in dalka uu la kulmo caqabado iyagoo maqan sida in lasoo weeraro.
Madaxda dowladda iminka wax cabsi kama qabaan in la af gambiyo maxaa yeelay cida dhamaantooda isku heysa ee ay hoostagaan ayaa ah shisheeyaha jooga xalane.
Markuu Farmaajo Mucaaradka ku ahaa Xasan sheikh ayuu aad kaga doodi jiray in sharci ahayn in hal mar madaxda dowladda ka maqnaadaan wadanka isagoo taasi badalkeedana dadka usheegi jiray in hadii la doorto uu meesha ka saarayo dhaqankaasi.
Waxyaabaha iigu yaabka badan waxay tahay madaxwyne, reysulwasaare , gudoomiye baarlaman in hal mar dibada ku wada maqanyihiin yaa umaamulaya dalkii”ayuu ku celcelin jiray Farmaajo.
Waxay ahayd Farmaajo in hadda uu is weydiiyo ama la weydiiyo cida dalka u maamuleysa maadaama ay ka wada maqanyihiin wadanka.